Kaca oo Jijiga Taga Kurbo La,aan! – Rasaasa News
Jijiga, August 26, 2014 – Shacabka Ismaamulka Somalidu waxay dhawaanba ka dhursugayeen dhambaal xal ah oo xaga Addis Ababa uga yimaada, ka dib kolkii uu xisbiga maamulku is xag xagtay.
Samaynta dhismaha maamul ka hore, waxaa lama huraan ah in la sameeyo shuruucdii lagu maamuli lahaa maamulka la samaynayo, kaas oo lagu kala baxo kolka khilaaf yimaado. Shuruucdaas oo mar walba isbadalo wakhtiga la jaanqaadi kara lagu kordhiyo ama laga dhimo. Haddii ayna jirin shruucdaasi, suurto gal ma aha in maamulkaasi micna yeesho.
Hadaba waxaa iswaydiin leh maxaa marwalba oo khilaaf ka dhex dhasho masuuliyiinta Ismaamulka Soomaalida Addis Ababa loo geeyaa? Jawaabtu waa ismamulka Soomaalidu ma laha sharci. Waana fashilaada ugu wayn ee haysata ismaamulka Somalida marwalba.
Masuuliyiinta Ismaamulku ma aha kuwa dadku doorto ee waa la magacaabaa sidaas ayuuna maamulku sharci daro ku dhisan yahay. Haddii ayna dadku doorana kolka ay iskhilaafaan masuuliyiinta la magacaabay waa in cidii samaysay ay ku xalisaa sharcigii ay ku dhistay.
Hogaaminta xisbiga ismaamulka Somalida oo khilaaf u dhaxeeyey baryahan ayaa looga yeedhay Addis Ababa. Waxayna dadwaynaha Ismaamulku sugayeen in hogaaminta xisbigu la soo noqon doonaan go,aamo xaliya khilaafkooda.
Sida aan xogta ku helay way soo laabteen hogaaminta xisbigu, waxaana loo sheegay in khilaaf la,aan ay Jijiga joogaan inta looga imanayo, halkaas oo lagu xalin doono khilaafkooda. Waa arin adag in dad jaanta isgoynayaa meel wada joogaan!
Shaki kuma jiro in khilaafka iyo isnacaybka u dhaxeeya hogaaminta xisbigu meel xun marayso, laakiin waxaa wanaag ah in ayna dagaalami karin.
Wararka ka imanaya Jijiga waxay sheegayaan in ay socdaan abaabulo kala socda oo koox waliba doonayso in kooxda kale ay kaga takhalusto maalmo gudahood. Sidaas ayaana la filayaa in ay tahay fariinta Addis Ababa, lamana saadaalin karo kuwa karkaarka la waydaarin doono.